Nei paine mashoma mitambo yeLinux? | Linux Vakapindwa muropa
edumix | | Linux Mitambo, Zvimwe Linux
Kutamba ndinoshandisa Windows XP.
Iyi ndiyo mhinduro yeazhinji eiyo gamers uchishandisa Linux, vazhinji veava vashandisi havakwanise kushandisa chete Linux uye vanofanirwa kuvimba neyakajairika Windows partition yekutamba. Ehezve, izvi hazvingazove zvakakosha kana makambani nemapurojekiti akange akazvipira mukugadzira mitambo ye Linux… Asi hazvina kuwanda.
Izvo zvakare zvinondipa kufunga kwekuti kune yakawanda isiri-mutambi kana yekungoita mutambi Linux, senge yangu, ini ndaigara ndichitamba, pamwe paine zvakare kiyi yekuti nei kunyangwe ichishayikwa ichiri kuramba iri imwe nzira inozivikanwa (mukati izvo zvinokwana) kana nekukopisa nharo, chikonzero nei pasisina mamwe ma linuxers.
Tinogona kutaura zvine chokwadi kuti chinogumbura chikuru cheLinux hachisiri iyo Desktop, ichigona kuitisa neyakareruka, dambudziko ndiwo mutambo.
Nei kusiri kugadzira mitambo yakanaka paLinux isingafadzi?
Inofanira kujekeswa kuti kune mitambo muLinux, mamwe akanaka zvinoenderana nevanoziva. Asi vanhu vanonyunyuta nezve zvinhu zviviri:
Vashoma vangangoita vashandisi
Pane zvikonzero zvinoverengeka nei izvi zvichiitika, pakati pavo, kuti huwandu hwevashandisi hwakaderera. Iyi nharo yakajairika zvekuti zvirokwazvo isu tese takainzwa, asi zvakare zvinoshamisa kuti tiinzwe tichiziva kuti izvo zvinodiwa kutakura mutambo kubva kuchikuva chimwe hachisi chekuti vagadziri vawedzere ne2, asi "zvirinyore" vagadziri vanoisa port mutambo kune imwe chikuva. Chokwadi, iwe uchandiudza kuti kune maraibhurari anoshandiswa nemitambo iyi asipo muLinux, asi kana izvozvo hazviitike nemitambo yese uye harisi basa rakaoma kuita kana iyo indasitiri yemitambo yevhidhiyo yatendeukira kuLinux.
Ndiwo mutambo wakagadzirwa nekambani yeIndia Wolfire mitambo ZveWindows semitambo yese, zvakadaro, Wolfire akafunga kuendesa mutambo wake kuMac OSX neLinux. Mhedzisiro? Kutengesa kwayo kwakawedzera zvinopfuura zana muzana, nhamba isina kukwana zvachose kune avo vanotarisira kuti Linux neMacs dzingori pasi pe100% yevagari.
Iyo Yemahara Software Dilemma
Kune avo vanoti Linux inofanirwa kutsveneswa Mahara Software uye vazhinji vanozvitenda asi hazvina kudaro. Iyi tsika inotaura kuti Mahara Software inovandudzwa muhuwandu hwayo yakawanda kwazvo pasina kunyepedzera kwepundutso nevhoriyamu yayo. Iwo chete makuru mapurojekiti anowana rutsigiro, nekudaro, mazhinji emapurojekiti anoitika munguva yemahara uye kusimudzira mutambo harisi basa riri nyore. Zvinoda nyanzvi munzvimbo dzakasiyana siyana, kunyanya dhizaini uye mapurogiramu ekugadzirisa akasiyana neaya anowanzo shandiswa kune zvese, kana tikataura nezve mutambo wakanaka, nemifananidzo yakanaka, ndosaka mushandisi weWindows achizochinja. Sanganisa kuchikwata che nyanzvi dzakawanda Iyo yakaoma kwazvo, kunyanya isina kutanga kubva kutsigiro rebhizinesi inoiita iro titanic basa kubva pakutanga, uchifunga kuti mari inonyanya kukosha pano nekuti vanogadzira vanofanirwa kuisa nguva yakawanda pakunyora kodhi uye zvazvinotora, pamwe zvizhinji zvinoda kuzvipira kwakazara kubhejera.
Izvo zviyero zvemakambani
Kana isu tichizotaura nezvekupayona mapurojekiti, ivo vangangomhanya mumhando dzematambudziko zvakanyanya, ini ndatozvitaura pamusoro apa, kune maraibhurari akajairika emitambo yemavhidhiyo uye yevhidhiyo zvakajairika izvo ndezvekutengesa uye hazvigone kuitiswa mu Linux nekuda kwezvikonzero zviri pamutemo.
Vatambi veLinux vanozviziva, asi pamwe vatambi vatsva havaiti Pane dzimwe nzira dzinoverengeka dzekutamba paLinux kana mutambo wacho usingawanike yeLinux:
Shandisa Waini: Izvo yekutanga uye yekutanga, sisitimu yakaiswa mukati meLinux iyo, mukuita, inoburitsa Windows (kunyangwe mamwe ma linuxers achisemesa nekuti zvinotaurwa nenzira iyoyo, asi ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekutsanangura) kuitira kuti zvishandiso zvedu (kwete mitambo chete) zvimhanye paLinux. Mamwe maraibhurari akaita seDirectX uye mamwe maWindows mapakeji anogona kuiswa neWine. Asi Waini chete haina kunaka kumhanya mitambo yazvino.
Cedega: Iyi papuratifomu inotsigirwa neWine uye inokutendera kuti uite zvakafanana nezvinoitwa naWine, asi nenzira inoshanda uye yakazvipira yekumhanyisa mitambo kuburikidza nemaraibhurari ekuchengetedza (Waini ndeye GPL). Nyasha huru dzaCedega ndidzo inokutendera iwe kutamba mitambo yazvino kwazvo hapana Linux vhezheni, asi isina kukwana, dzimwe nguva zvinoda kuchinjika kune yega yega mutambo kuti ushande uye vazhinji vatambi vanoti iro rekutamba ruzivo harina kufanana.
Kutenda kwangu ndekwekuti izvi zvine yakawanda yemhosva indasitiri, zvakada kufanana nenyaya yehardware. Chinhu chakanyanya kushata ndechekuti havana kuona mugodhi wegoridhe wavari kutambisa. Kana paine chero mhosva yakasara yakarembera yakatenderera, ndeye iyo vashandisi vanonyanya kungoita uye ivo vanogadzikana kuve neWindows partition yekutamba nayo (iyo pane imwe nguva muhupenyu hwavo ichavapinza mumatambudziko kana vachida kufambisa chimwe chinhu).
Kunyangwe ini ndichigara ndichifunga kuti kune zvinonyaradza zvekutamba, hapana mubvunzo nezvazvo.
Linux ichashanduka kuva chikuva "chinotamba" here?
Mufananidzo wacho ndewe fabioperez Flickr mushandisi kuburikidza nerezinesi Creative Commons
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Nei paine mashoma mitambo yeLinux?
Chokwadi unoita, asi izvo zviriooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo….
Izvo zvinouya asi chii chandinokuudza, chero bedzi paine vashandisi veLinux seni ndiri kutamba paconsole, hapazove nevazhinji vari pamusoro pevagadziri
Handina zvichemo zvikuru, ndinogara ndichiedza kutanga newaini kana ikasaisa mushe ndinoedza kutamba pa linux kana winedoors kana ikaramba ichitadza ndinoedza mitambo yecrossover (kwandiri yakanakisa) uye kana isiri yekupedzisira ndinoedza goho. Nesanganiswa iyoyo kashoma kuti chimwe chinhu chisashande, chinhu chega "chinondinetsa" ndechekuti ini handina kumbobvira ndawana joystick inoenderana neLinux :( ndakayedza iyo ne psx controller yakabatana neparutivi port uye zvese zvakashanda kunze kweiyo crosshead, uye mutungamiriri weXbox 360 uyo anofanirwa kuve nerutsigiro rwekuzvarwa kubva kernel 2.6.24 haundishandire: nyaya dai isiri iyo ndakabvisa mahwindo asi nezuro
Ini ndinogona kufunga nezve akati wandei zvikonzero:
1. Zvichida makambani anoona "iyo inotyisa 1%" yemugove wepasi rose wemusika.
2. Pamwe vanotenda kuti kuve Mahara Software, yavo software inofanira kunge iri mahara.
3. Makambani anogona kufunga kuti hapana mushandisi weLinux achabhadhara mutambo wavo, nekuda kweLinux's hacker yapfuura uye YEMAHARA.
4. Zvichida ivo vanobhadharwa nemamwe makambani kana kusainirwa "kusingaperi kusingaperi" nemamwe mapuratifomu uye hapana mumwe kunze kwavo.
Ini ndinogona kufunga nezve izvi nezviuru zvezvimwe zvinhu zvakakosha, kubva pane zvine musoro kusvika kune vanopenga zvakanyanya. Ivo vane mhinduro. Asi iwo mubvunzo unenge uri:
Kana BIG mitambo ichigona kuridzwa paLinux, ichagamuchirwa nevazhinji uye kukwikwidza musoro-ku-musoro muzviverengero neWindows?
Kune zvimwe zvinhu zvinoita kuti mamwe makambani emamwe marudzi emaApplication aone Linux se "green".
Ini ndinobvumirana nebachi.tux uye ayo mana mapoinzi.
Kune rimwe divi, ini handingade izvozvo nekuvapo kweayo ese mitambo muLinux, kutsemuka uye kiyi yeLinux yaizotanga kugadzirwa, ndizvo zvandinonyanya kufarira nezveLinux, kuti ndine zvese uye pasina kudiwa kwe kutsemuka uye makiyi makuru, ndoda kuve hacker app mushandisi.
Pakave nekutaura kwakawanda pamusoro penyaya mazuva ano. Ini pachangu ndaizoda kuti paive nemimwe mitambo yeLinux, uye kuti makambani anotanga kuona kuti kuisa mitambo kune ino system kunogona kuvaunzira zvakanaka, asi ini handizvione semuganho pakukura kweLinux.
Chero ani zvake anoda kushandisa PC kuti awedzere kushandisa anowana muLinux sisitimu iyo, kunze kwekunge ari nyanzvi munzvimbo dzakatarwa, inoenderana nekuwedzera kune zvaanoda zuva rega rega, akawedzera kune zvakanakira izvo Linux zvine munzvimbo dzinobereka, kuita kuti iri boka revashandisi risina matambudziko ekufambisa.
Nekuwedzera kweiyo mushandisi quota, kugadzirwa kwemitambo yeLinux kuchangoerekana kwawedzera. Chikamu che1% chemusika hachisi icho chinoyedza kune mamwe makambani.
Gamers nderimwe remapoka ekupedzisira evashandisi kutamira kuLinux, sezvo Windows ichivapa zvese zvavanoda.
Ini ndinofunga kuti kumirira munda wemitambo muLinux kuti uenzaniswe neiyo yeWindows, zvakafanana nekumirira gore reLinux padesktop kuti risvike, nekuti, kunze kwekunge paine chakanyanya kubudirira kesi yekambani Chero ani anopinda mukati. ino system, vazhinji vevagadziri vemitambo hombe havazove vachida kuisa njodzi ku1% chikamu chemusika.
Isu ma linuxers hatigone kuita zvakawanda kunatsiridza izvi, ingo gamuchirai zvine hushamwari kukambani yega yega yakashinga iyo inotangisa kana mudiki mutambo mudiki weLinux, zvisinei nekuti ndeya muridzi here kana kuti kwete, nekuti isu ma linuxers tinowanzoona muridzi = akaipa
Ini handisi mutambi zvachose, kune izvo zvinonyaradza. Ini ndine hanya yakawanda, yakawanda yakawanda nezve iyo Hardware nyaya. :)
mmm ndinoshandisa Xbox360 x)
Rafael Hernampérez Martin akadaro
Ini ndakamwa nyika yemavhidhiyo emitambo kubva kuSpectrum, kutora chikamu mukugadzirwa kwemavhidhiyo emavhidhiyo emapuratifomu ese akavakirwa paZ80 uye gare gare.
Mukuona kwangu kwekuzvininipisa, ini ndinofunga kuti kune vhidhiyo yemitambo programmers yekusarudzira vhidhiyo yemitambo kuvandudza kweLinux ndeyekuti kune kwakawanda kudiwa kwepuratifomu iyi. Kune rimwe divi, ini ndinofunga kuti kuita chirongwa chakavhurika chemutambo wepuratifomu kana Game Mugadziri yemapuratifomu ese ichave iri danho rakakosha kuitira kuti vese Ventanucos nevashandisi vePingüino vanakidzwe nemitambo yakafanana, pasina kukosha kwekudyara mumapurogiramu yakanangana nepuratifomu yega yega, uye mamwe mafomati zvakare.
Pindura kuna Rafael Hernampérez Martín
Pane imwezve pfungwa yandinofunga yakakosha ... uye ndiko kuti Linux igate rinonyungudika rekugovera uye mapurojekiti.
Kana vakasunungura mutambo ... Zviri mu deb? Autopackage? Rpm? binary? tsime? repository?
Ini ndinozviona zvakanyanyisa kuti kambani itore mitambo ichiona panorama. Kana iri mune dhiri, zvinoenderana padivi Kana iri mu rpm, iyo sisitimu ichiri kukuvhuvhuta nehukuru hwefaira uye kudzikama kwemandriva (xD). Mune Autopackage ... nekuti yakanyanya kuomarara kune vateereri yakanangiswa pa (Hongu, nyangwe izvo) uye kana iri mune bhainari kana sosi ... juas ... Ini ndoda kuzviona, iye mutambi achigadzira Chinodiwa Speed ​​Fiat Brío ProCarbon (Ehe, inotevera nfs yakatsaurirwa kune esty xD)
Zvese zvinotipa sarudzo, yekambani inoita kuti chigadzirwa chive chinodhura, kana kuchitora kubva kune vatengi vepakati (binary, sosi).
Pamwe hazvisi zvekuda chete, pamwe isu tinofanirwa kuungana uye kuyedza kugadzira isinga gadzike pane chero sisitimu isina kutemwa nemusoro kana kuisa "apt-tora -b sosi Halo" mune inouraya ...
Izvo zvakafanana kupusa, asi haufanire kutarisa guvhu rako mune izvi, iyo neverwinternights yaityisa kuisa, pamwe iwe waida nguva, kurodha nguva, uye uteedzere mirairo kune iyo tsamba.
Uye unongova mumwe muenzaniso wemutambo wemuno ...
Ignatius Yafe akadaro
Mhoroi, nguva pfupi yadarika ndanga ndichifunga nyaya yekuchinjira kuLinux, parizvino ndine mugove unonzi Trisquel wakaiswa pamushini chaiwo.
Zvakanaka ichi ndicho chikonzero chikuru nei ndisati ndafunga kushandura parizvino, nekuda kweiyo yakapusa yekushomeka kwemitambo, ndinofunga zvinhu zvinokonzeresa izvi ndeizvi:
1- Kushaikwa kwemaraibhurari kana nharaunda dzekuvandudza mutambo, ndinoziva zvishoma nezve izvi sezvo ndiri kugadzira mitambo midiki mu Game Muiti kuitira kuti mune ramangwana ndive akanaka indie mugadziri.
Asi iyo haisi iyo poindi, asi maturusi akaita seaya ari kushomeka, ndichiri kuziva kuti kune dzimwe nzira dzemahara dzakadai seGDevelop ine chiitiko chiitiko chakafanana neicho chekuvaka2 uye Godot injini, graphical injini inoshandisa python semutauro wekunyora.
Asi maturusi mazhinji emakambani anoshandisawo maraibhurari eMicrosoft kumaprojekti avo e3d akadai DirectX.
Mugove wemusika we linux hauna kukura sewe windows uye mukati mevaparidzi uye kushambadzira pane pfungwa iri kutsvaga musika wakakura, nekuti mu linux hamuna vanhu vakawanda sema windows (handigone kutaura nezve MAC kubvira Ini handizive chaizvo kuti chii chikamu chayo) semuenzaniso mumahwindo kune vanhu vazhinji uye vazhinji vevanhu vatambi.
Linux panguva ino ini ndinozviona zvakanyanya zvecomputer kana zvekufunda zviitiko (nekuti zvirinani munyika yangu linux inoshandiswa muzvikoro zvizhinji)
Pindura kuna Ignacio Yafe
Hackers: Ndiwe mumwe wavo?
Ongororo: Chii chinonzi hacker?